Yerli Üretim Bağımsızlığın Kritik Noktası – RayHaber | raillynews
HomeGUUDXaaladda Khatarta ah ee Xornimada Wax-soo-saarka Indigenous
27 / 09 / 2017 GUUD
Kooxda Gawaarida Gaadiidka Anadolu (ARUS) ayaa qabtay tii labaad ee Maalmaha Wadashaqeynta Wax Soo Saarka ee Gudaha. Soosaarayaasha ugu waaweyn ee dhacdada; Durmazlar, Bozankaya, Hyundai Eurotem, Siemens, xubnaha ARUS waxay ku wada kulmeen isla miiskii.
In barnaamijka, xubnaha ARUS ee ka shaqeynaya injineernimada iyo naqshadeynta, bogie, hawo qaboojinta, mashiinnada maareynta iyo nidaamka xakamaynta, hababka jirka, nalalka nalka, nidaamka macluumaadka rakaabka, software, tayada, imtixaanka, shahaadada iyo meelaha kale, bandhigyada shirkadaha iyo shirarka ganacsiga .
Ama waxaan rabnaa in aan isticmaalno suurtogalnimada dalkiisa markaan soo saaro baahiyahayaga
Isagoo ka hadlaaya furitaanka Maalgashiga Iskaashatooyinka Maal-gelinta Qaybta Gudaha oo ay ka qayb-geli doonaan, Gudoomiyaha Ostim-beereedka Daljiraha Orhan Aydın ayaa sheegay in awoodda warshadeed ee dalkeenna ay ka sareyso tan la yaqaan oo la arko. Aydin ayaa yiri, "Waxaan rabnaa inaan isticmaalno suurtogalnimada dalkiisa intii aan soo saarayno baahiyahayaga oo aan hirgelino. Tani waa mustaqbalka waddankeena, meesha ugu muhiimsan ee xoriyaddeenna iyo madax-bannaanida. "
'Waxaan leenahay lacag, waan ku qaadan karnaa meel kasta!' Orhan Aydın ayaa sheegay in dalka uusan ku fekereynin fikirka iyo in aan shaqo la heli karin dadka shaqo la'aanta ah. "Waxaan u mahad celineynaa dhammaan kuwa ka shaqeeya, soo saarista iyo naqshadeynta. Hambalyo, mahadsanid. Waxaan u maleyneynaa in wasaaradda gaadiidka, arrimaha badda iyo isgaadhsiintu ay si gaar ah uga taxaddaraan arrintan. boqolkiiba 51 of saarka la fikradda ruuqaansanayo ah ka dhacay yimid dalka Turkiga waxaan arki, waannu noolaan our. "
Kadib markii la qorey 51 boqolkiiba, wax waliba isbeddelay, aragtida shirkadaha ajnabiga ah iyo xafiisyada xafiisyada dawladda ayaa isbeddelay, "Aydin ayaa yiri," Qof walba waa magacaabaa 52, 53, 60, 70, 80. Taasi ma'ahan xitaa nagu filan. Waxaan qaadanaa shirkadahayaga gudaha iyo kan qaranka, iyaga oo diirada saaraya, haddii ay lagama maarmaan noqoto, shirkado shisheeye; Moodooyinka aan ka heleyno wax intaa ka badan ayaan rabnaa xilligan. daneeyeyaasha oo dhammi weyn ee waaxda halkan Turkey. Jaamacadaha, Ururrada aan dawliga ahayn, shirkadaha, hay'adaha dawladdu waxay ku jiraan dhammaan kooxdan. qorshaha mustaqbalka Turkey ee la xidhiidha qaybta this wada, waxaana. Waxaa jiri kara suurtagal ah aaggan. Tani waa goob ballaadhan oo ka baxsan warshadaha difaaca
Duqa magaalada Aydın ayaa intaas ku daray in ay doonayaan in ay degmooyinka u soo dhawaadaan falsafadan.
Warshadaha waawayn ee waawayn sidoo kale waxay leeyihiin waajibaad weyn "
TCDD iyo ARUS Guddoomiyaha Guddiga İsa ApaydınSebtember 23, 2017 TCDD. Hawlgalku wuxuu bilaabmay isagoo caddaynaya inuu ahaa sannad-guuradii. "Sababtoo ah 161, ayaa la bilaabay wacyi-galin cusub oo wacyi-gelineed oo lagu hormarinayo hoggaanka madaxweynaha iyo ra'iisul-wasaaraha iyo taageerada dowladdeena, iyo jidadkeennaba dib loo soo celiyay siyaasad dowladeed. Inta lagu jiro ololahan, wax ka badan miisaannada 2003 ayaa lagu maal-galiyay tareennada ilaa iyo haatan, Ap Apaydin ayaa sii waday ereyada; Waxa uu tilmaamay in ay dalkayaga ku soo bandhigeen tiknoolaji sare oo tareen sare leh iyo raaxaysi sida waddamada horumaray.
Apaydin wuxuu sharaxay in horumarinta wadooyinka tareenada ee waddankeena, ay sameeyeen shaqooyin muhiim ah oo ka kooban baaxada wax soo saarka gudaha iyo tan qaranka, waxayna sii waday in: iyle Taageerada TCDD, waxaanu soo saaraa tareeno xawaare sare leh, hurdo iyo jidadka waddankeena. Waxaan awoodnay inaanu soo saarno tareenka naaftada ah, gawaadhida xamuulka, mashiinka naaftada ah iyo E-1000 farsamoyaqaan korantada ku shaqeeya, gawaarida masaafo iyo nidaamka signalka jidka tareenka labadaba gudaha iyo degaanka. Laakiin tani kuma filna. 2023 sannadka 500 Waxaan rabaa in aan u fiirsado xaqiiqda ah in aan ahayn TCDD oo keliya, laakiin sidoo kale warshaduhu waxay leeyihiin waajibaad weyn oo ay ku dhistaan ​​khadadka tareennada iyo inay soo saaraan baabuurta tareenka ee gudaha si loo gaaro bartilmaameedka dhoofinta USD ee bilyaniga ah iyo in la taageero horumarka iyada oo la ilaalinayo lacagta qalaad ee waddankeenna.
"Haddii aad isku kalsoonaato, waxaan sameyn doonaa wax walba"
Guddoomiyaha ASO Nurettin Özdebir ayaa sheegay in TCDD uu kacay kaddib markii 2003 uu yiri " Waxaan u baahannahay inaan soo saarno tareenno xawaare sare leh, labadaba leh warshadaheeda, mashruuca naaftada gudaha, iyo mashruuca tareenka korontada, waxaan rajeyneynaa kadib. Waxaan leenahay shirkado awood u leh inay sidan sameeyaan. Haddii aad isku kalsooni naga siiso, waxaan sameyn doonaa dhammaantiis aan caadi ahayn. "
Özdebir, oo u mahad naqay Wasaaradda Duulimaadyada cusub, 1 bilyan oo doolar ayaa lagu dhuftay Turkish Airways, ayaa la wadaagay kuwan soo socda: Waxaa jira dalal adduunka ah oo kordhiya 100. Waxaan jeclaan lahaa inaan sameyn karno. Iyada oo ay tahay warshadda Ankara, waxaan hubaa in aan ku dari doono ugu yaraan 1 bilyan oo ah lacagaha bilyan ee 10. Si la mid ah gaadhi tareen ah. taariikhda TCDD Turkey ayaa dhab ka dhigay a kacaanka aamusan heer sare ah ee sahayda. Marka ugu horaysa, 51 wuxuu qeexayaa iibsashada alaabta tiknoolajiyada. Tani waa tii ugu horaysay ee dalka Turkiga. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Raisul Wasaare, Masuuliyiin, iyo kuwa ka qaybqaatay. Tani waxa ay ahayd a jeestay taariikhda Turkey. Taas ka dib, 51 waa shardi ah dhammaan iibsiyadaas oo kale. "
Isagoo xusay in siyaasadaha la abuurayo tartanka waddanka, isla markaasna madaxweynaha ASO wuxuu sheegay in ay jiraan ugu yaraan laba shirkadood oo ka wada shaqeynaya sidii alaab-qeybiye ama qandaraasle. Özdebir wuxuu yiri, "Halka tartan, waxaa jira marwalba R & D, hal-abuurnimo, karti iyo tartan. Waxaan u baahanahay inaan helno ugu yaraan shirkadaha 2. Gaar ahaan, barnaamijka Iskaashiga Iskaashiga Shaqada, waxaa jira faa'iido weyn oo ah in lagu yeesho in ka badan hal shirkad iyo tartan tartan ah. "
Qaadashada Wax soo saarka qaranka iyo kan qaranka waa jadwal heer qaran ah
Ku-xigeenka Maareynta Wasaaradda Gaadiidka, Isgaarsiinta Badda iyo Isgaarsiinta Orhan Birdal, 2003-ka Abaabulinta Qaran ee Qaranka iyo Degmadu waxay kor u kacday magaalada, 80-90 wax ka badan tareenka waddada tareenka ee muddadaa la sameeyay iyo sii waday in la sameeyo muddadaa sii socotay.
Birdal ayaa sheegay in ay ku dadaalayaan in ay sameeyaan inta ugu badan ee ay ku miisaansan karaan miisaaniyadda loo qoondeeyey iyaga Wasaaradda. Bakanlık Tan iyo sanadkii 2003, waxaan maalgashannay wadarta miisaaniyada 347 ee Wasaaradda. Tan laga soo xigtey, qaybta tareenka ayaa heshay saamiyo ka badan lacagtii 60 bilyan. Marka mashaariicda la dhammeeyo, waxaan heleynaa 2023 km xawaaraha sare iyo 3.500 km xariiqa tareenka xawaaraha sare iyo dhammaan lineashadayada caadiga ah waa la xiri doonaa oo la saxiixi doonaa ilaa 8.500. "
Marka laga soo tago mashaariicda madax-bannaanida dhaqaalaha, Orhan Birdal wuxuu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in loo jeesto waxsoosaarka gudaha iyo kuwa qaranka ee waddada tareenka iyo in la abuuro fursadahayaga qaranka. "Waxaan aragnaa in horumarka weyn ee la gaaray ilaa hadda arrintaan. Inkastoo xitaa qalabka ugu fudud ee la soo dhoofiyo illaa shalay, haddana waxaan awoodnaa inaan soo saarno xitaa gawaarida la jiido iyo kuwa la jiido ee ku jira barnaamijyada TCDD. Waxaan rajeynayaa in geeddi-socodka deegaan-soo-saarka iyo waddan-gelinta la dhisi doono iyada oo soo saareysa tareenkayaga xawaaraha sare leh isla markaana hoos u dhigo wadooyinka sida ugu dhakhsaha badan. "
Ugu dambeyntiina, Maahmaah Birdal wuxuu hoosta ka xarriiqay waxyaabahan soo socda: Waallid Ma aha habka saxda ah ee lagu filayo soo-saarka gudaha iyo tan waddanka tareenka in ay fuliyaan waaxda dawlada sida qeybaha kale. Waa waajibaad qaran oo ku wajahan waaxdeena gaarka ah, kaas oo koraya oo kobcaya sababtoo ah xasillooni siyaasadeed iyo xasilooni dhaqaale, si loo beddelo wax soo saarka gudaha iyo tan qaranka. Waxaa ka sarreeya dhammaan qadarka ay xubnaha ARUS ay soo saaraan wadarta gaadiidka 48 oo ah calaamad heer qaran ah oo leh boqolkiiba heerka gudaha 60 ilaa 224 boqolkiiba. "
Ogeysiiska Qandaraaska: Adeegga hanti dhawrka madaxbannaan ayaa la qaadi doonaa
E-1000 Gawaarida Korontada ee Qaranka
Nidaamyada tareenada ee qaybaha
Wax soosaarka gudaha